के हस्तमैथुन गर्नेहरु साँच्चै दुब्ला हुन्छन् ? | Lifemandu
एजेन्सी । दुब्लो हुनुमा हस्तमैथुनको भूमिका कतै हस्तमैथुनले हानी गर्छ कि रु धेरैमा चासो र चिन्ता हुन्छ । यौन आनन्द प्राप्त गर्ने उपायहरूमध्ये सबैजसोका लागि यौन अङ्गको घर्षण नै प्रमुख हो । यौन सम्पर्क गर्दा यौन अङ्गहरू एक–आपसमा घर्षण गराइन्छ ।
सिद्धान्ततस् यौनसम्पर्क गर्दा र हस्तमैथुन गर्दा यौन अङ्गको घर्षणबाट यौन आनन्द पाउने प्रक्रिया उस्तै हो । त्यसैले चिकित्सक भन्छन् यौनसम्पर्क गर्दा हानि हुँदैन तर हस्तमैथुन गर्दा हानि हुन्छ भन्न मिल्दैन ।
तपाईंको दुब्लोपनसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन, त्यसैले यस विषयमा अनावश्यक चिन्ता नलिनु नै बेस हुन्छ । हस्तमैथुन एउटा स्वाभाविक कुरा हो । यस विषयमा अनेक भ्रम भए पनि यसले यौनइच्छाको दमनबाट हुने तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ ।
हस्त मैथुन गर्ने बानीले अनावश्यक गर्भधारण, देहव्यापारीसँगको यौन सम्बन्ध, यस्ता क्रियाकलापमा खर्च हुने धन तथा समय दुरुपयोगबाट पनि जोगाउँछ । अर्को व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क नै नहुने भएकाले अहिले चर्चामा रहेका एचआईभी वा अन्य यौन संक्रमण पनि हुन पाउँदैन ।
के हस्तमैथुनले सॉच्चिकै मानिस दुब्लो हुन्छ ?
एजेन्सी । हस्तमैथुन आत्मरतिको सबैभन्दा सजिलो र बहुपरिचित माध्यम हो । यौनसाथी सँगसँगै बसेर अलगअलग गर्ने वा परस्परमा एकअर्कालाई गरिदिने हस्तमैथुनलाई पारस्परिक हस्तमैथुन भनिन्छ । हस्तमैथुन सबै उमेर र
दसैँमा घर जाँदै हुनुहुन्छ ? कोठामा चोरी होला, यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
काठमाडौं, असोज १० । महान चाड दसैँ सुरु भएसँगै धेरै जना काठमाडौंबाट बाहिरिइ सकेका छन् । दैनिक जसो हजारौं मानिसहरु काठमाडौं उपत्यका छोड्दै गृह जिल्ला फर्कन थालेका छन् । यही मौका छापेर काठमाडौंमा उपत्